शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाको योगदान बारे अन्तरक्रिया हुँदै « Farakkon
तुलसीपुर,फागुन ११ । गिरिजाप्रसाद कोईरला फाउन्डेशन दाङ घोराहीले सोमवार घोराहीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। ‘शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोईरालाको योगदान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम घोराही नगरको सभाहलमा हुने भएको छ ।
जिपी फाउन्डेशनले फागुन १२ गते घोराहीमा गर्ने कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेताहरु डा. शेखर कोईराला, दीपक गिरी, डा. चन्द्र भण्डारी, गगन थापा लगाएका नेताहरु दाङ आउने नेपाली काँग्रेस दाङका सचिव शंकर डाँगीले फरककोणलाई जानकारी दिए ।
जिपी फाउन्डेसनका सचिव कृष्णप्रसाद गौतमले उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सुजाता कोईरलापनि आउने जानकारी दिए । गौतमले प्रजातन्त्र प्राप्ति र संस्थागत गर्न योगदान गरेका विभिन्न पार्टीका व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको बताए ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार मध्यान्ह १२ घोराही उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा सुरु हुने हुँदा शुभेच्छुक सबैलाई सहभागिताको लागि आयोजकले आग्रह गरेको छ ।